Aqalka Cad oo laga mamnuucay wariye katirsan CNN – Radio Daljir
Noofember 8, 2018 4:57 b 0
Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa laga mamnuucay wariyaha CNN ee Aqalka Cad Jim Acosta, kadib markii ay iska horyimaadeen madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump xilli uu socday shir jaraa’id oo Trump uu qabtay.
Go’aanka Aqalka Cad ayaa lagu sheegay sababta in suxufiga Acosta looga mamnuucay inuu gudaha Aqalka Cad usoo gudbo ay tahay isku day uu shaqadeeda kaga hor istaagay kaaliyada Aqalka Cad oo uu Mikroofanka ka dafay.
Wariyaha ayaa su’aal waydiiyay madaxwayne Trump, taasi oo ku saabsanayd qaxootiga Mareykanka ee ka imaanaya dalalka Latin Amerika ee soo gaaraya xuduudaha Koonfureed ee Mareykanka, Trump ayaa jawaab siiyay wariyaha oo uu ku yiri taasi ayaa kugu filan, balse wariyaha ayaa ka dhego adeegay si’uu su’aal kalle u dabo dhigo , isagoo gacanta ku riixay gabadha kaaliyaha ka ah Aqalka Cad oo doonaysay in Mikroofanka ka dafto.
xogahayaha dhanka saxaafadda ee Aqalka Cad Sarah Sanders ayaa qoraal ay soo saartay ku eedaysay wariyaha Acosta inuu saaray gacantiisa gabar yar, isagoo u isku dayaya shaqadeeda inuu ka horistaago” Taasi oo aan marna aan la aqbali akrin” sida ay sheegtay.
Wariyaha ayaa boggiisa Twitterka kaga jawaabay qoraalka Sanders, isagoona been ku tilmaamay inuu gacantiisa ku horisaatagay wariyaha.
CNN ayaa ku tilmaamay inuu si buuxda uu u taageersanyahay wariyihiisa, waxaana talaabada Aqalka Cad uu ku tilmaamay mid uu ku aargudanayo loolankii doorasho ee Mareykanka iyo kaalintii uu ka qaatay CNN.